IHungary Ivumela Ukungena Kwizivakashi Ezigonywe Ngokugcwele ZaseRussia
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IHungary Ivumela Ukungena Kwizivakashi Ezigonywe Ngokugcwele ZaseRussia
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • IHungary Izindaba Ezintsha • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Russia Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Kusukela ngoJulayi 27, 2020, uhulumeni waseHungary uzovumela abantu baseRussia abaphethe izitifiketi zokugoma ze-COVID-19 ukuthi bangene ezweni.
Izivakashi zaseRussia kudingeka zibe ne-visa evumelekile yeSchengen kanye nesitifiketi sokugoma.
Umuthi wokugomela waseRussia iSputnik V coronavirus ubhaliswe eHungary.
Izinqubo zokukhishwa kweVisa azikashintshwa.
Izivakashi ezivela eRussia Federation ezigonyelwe i-COVID-19 zizokwazi ukungena ngokukhululeka Hungary kusukela namhlanje, ngokusho kwesitatimende sabezindaba esikhishwe yiNxusa laseHungary eMoscow.
“Kusukela ngoJulayi 27, 2020, uhulumeni waseHungary uzovumela abantu baseRussia abaphethe izitifiketi zokugoma ze-COVID-19 ukuthi bangene ezweni. Kulokhu, izakhamizi zaseRussia zizokwazi ukungena eHungary ngaphandle kwemingcele, ngaphandle kokuhlolwa okuyisibopho nokuhlolwa kwe-PCR, uma zine-visa esebenzayo yeSchengen nesitifiketi sokugoma, ”kusho isitatimende.
Ngokusho kwenxusa, izinqubo zokukhishwa kwama-visa azikashintshwa. Kodwa-ke, kuzodingeka ukuthi ungeze isicelo ngesitifiketi sokugoma.
Umuthi wokugomela waseRussia uSputnik V COVID-19 wabhaliswa eHungary futhi usetshenziswa njengengxenye yomkhankaso kazwelonke wokugoma.
Phambilini, ukuze zivakashele eHungary, izakhamizi zaseRussia bekufanele zinikeze izivivinyo ezimbili ezingezinhle ze-PCR ezenziwe ezinsukwini ezinhlanu ngaphambi kokungena ngomehluko wamahora angama-48, noma zidlule ngokuvalelwa amasonto amabili.
IPhini Likamongameli we Inhlangano yabaqhubi bezokuvakasha yeRussian Federation UDmitry Gorin ephawula ngemithetho emisha yokungena kwabantu baseRussia eHungary, wagcizelela ukuthi ukuvulwa kwezwe kuzoba yilokho okubizwa ngokuthi "umgudu oluhlaza", okungahle kube nokususwa kwemikhawulo kwamanye amazwe.
I-Brussels Airlines yethula uhlobo olusha lobunikazi
I-La Réunion Ikhuphuka Ijubane E-Seychelles Ngaphambi Komoya...
I-TAT Yethula “Vakashela Unyaka Omusha WaseThailand 2022” kwa-WTM...
I-Sensual Vegan Chocolate entsha